Prezidaantiin Yaman Duraanii Ajjefaman
Barreessaan muummichi ka Tokkummaa Mootummootaa Antooniyoo Guteres Yaman keessatti akka walii-galtee lola dhaabinsaa mallatteessamu waamicha dhiyeessan. Prezidaantiin biyyattii duraanii Alii Abdullaa Saaleh ajjeefamuun eega dhaga’amee booda waamicha kana dhiheessan hoogganaan jaarmayicha addunyaa kun.
Umriin isaanii 75 kan ta’e Saaleh yamaniin waggootii soddooma caalaaf bulchan eega turanii booda bara 2012 aangoo irraa darbaman. Sana booda garee riphxeelooltoota Hutti kanne Iraan biraa deggersa qabanti hidhachuun kan addunyaa biraa bekkannoo argatan prezidaant Abduu Raabuu Mansuur Haadi biyyattii keessaa ari’an.
Saaleh dhiyeenya kana Saa’udii waliin hariiroo qaban haareessuuf akka jiran kan dubbatan yoo ta’u riphxeelooltoonni har’a ajjefamuu saaleh labsan akka jedhanti ituu gara Saa’udii deemuuf jedhanii ajjefaman jedhu.
Godina Wallaggaa Bahaa fi Lixa keessatti Hiriiraawwan Mormii Geggeessaman
Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa Kora dinagdee Afrikaa Finfinneetti Eegalame Banan
Ministarri Ittisaa Yunaayitid Isteets Paakistaan Dawwatan
Prezidaant Traamp: Akkaataan Gorsaan Naga-eegumsaa Isaanii Duraanii Itti Qoratame "Kan Madaallii Haqaa Eege Miti" Jedhan
‘Qeerroo fi maanugddon Baalee Roobee kaanee rakkoo ummata keenna irratti mari'achuuf osoo kora addaatiif Ambootti yaanuu dabruu nu dhorkan’